Samoa ayaa martigalin doonta tartanka soo socda ee Jasiiradaha Miss Pacific Islands
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Samoa ayaa martigalin doonta tartanka soo socda ee Jasiiradaha Miss Pacific Islands
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Samoa • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Marka la eego aafada hadda jirta, Samoa jeclaan lahaa inaan ka caawiyo dadka safarka ah inay ku sii riyoodaan qorshayaashooda safarka mustaqbalka, iyagoo rajeynaya in la diro Covid-19.
Tartanka sanadlaha ee Miss Pacific Islands waxaa lagu qaban doonaa Samoa bisha Nofeembar, ka dib guushii Miss Samoa 2019, Fonoifafo Nancy McFarland-Seumanu.
Tartanka Miss Samoa iyo Miss Pacific Islands waxay qayb ka ahaayeen dhaqanka Samoa iyo dhaqamadiisa soo jireenka ah muddo ka badan 30 sano. Loogu talagalay inay ka dhacdo Apia bisha Sebtember 2020, Miss Samoa waxay u heellan tahay taageeridda fursadaha loogu talagalay haweenka da'da yar ee Samoan. Laga soo bilaabo 1986, Jasiiradaha Khasnadda leh ee Koonfurta Baasifigga waxay ku xusheen guuleyste nasiib leh iyada oo loo marayo tartanka, oo waajibaadkiisu noqdo inuu metelo oo uu dhiirrigeliyo Samoa heer gobol iyo heer caalamiba. Ku guuleystaha sidoo kale wuxuu u shaqeeyaa sidii danjire qaran ee jasiiradaha intii lagu jiray sanadkii boqornimadiisa.
Ku guuleystaha Miss Samoa wuxuu sii wadaa inuu ku tartamo tartanka Miss Islands Islands, taas oo u adeegta sidii madal lagu dhiirrigelinayo dhammaan gobolka Jasiiradaha Baasifigga. Aasaasay dowladda Samoa sanadkii 1987, munaasabaddu waxay aqoonsaneysaa astaamaha, sirdoonka, iyo hibada haweenka Jasiiradaha Baasifigga oo ay ku jiraan tabarucaadkooda arrimaha gobolka.
Jasiiradaha Miss Pacific Islands ayaa ka dhici doonta Apia bishaan Nofeembar, ka dib guushii Samoa intii lagu jiray tartankii 2019 ee lagu qabtay Papua New Guinea sanadkii hore. Sannad kasta, wakiillo ka socda illaa 12 Jasiiradaha Baasifigga ah ayaa u tartamaya taajka. Tartamayaasha sanadkii hore waxaa ka mid ahaa Miss Samoa, Miss American Samoa, Miss Cook Islands, Miss Fiji, Miss Marshall Islands, Miss Nauru, Miss Papua New Guinea, Miss Solomon Islands, Miss Tahiti, Miss Tonga, Miss Tuvalu, iyo Miss Wallis & Futuna.
Munaasabadan ayaa loogu dabaaldegayaa dhaqanka iyo quruxda kaladuwan ee meelaha xiisaha leh. Tan waxaa lagu gaaraa iyada oo loo marayo xariifinta xayeysiinta waxqabadka tartameyaasha ee ay soo bandhigeen farshaxanada maxalliga ah ee ugu kartida badan iyo farsamayaqaannada umadaha Jasiiradda Baasifigga. Ilaa maanta, Samoa waxay ku guuleysatay magaca Miss Pacific Islands 7 jeer, oo ay ku jirto sanadkii hore, taasoo ka dhigeysa wadankii labaad ee Jasiiradaha Baasifigga ah ee ku guuleysta horyaal inta ugu badan jeer, marka laga reebo Jasiiradaha Cook Islands, oo iyagu guuleystay 14 jeer.
Dabaaldegyada sanadkan ayaa sidoo kale la jaan qaadi doona dabaaldegga 30 sano ee Teuila Festival, munaasabadda sanadlaha ah ee ugu weyn ee Samoa oo lagu soo bandhigo kuwa ugu wanaagsan muusikada dalka, qoob ka ciyaarka, cuntada, iyo farsamada.